Indlu entle yeentaba eBjorli, eLesja - I-Airbnb
Indlu entle yeentaba eBjorli, eLesja
Ikhabhinethi inokuhlala abantu aba-5 ubuninzi. Inokungena kwayo kunye nokungena simahla kwintendelezo. Igumbi lokuhlala eliphangaleleyo linombono onomtsalane kwiintaba ezijikelezileyo. Ibonelela ngendawo yokuhlala enesisa kunye netafile yokutyela.
I-Bjorli inokufumaneka kwincam ekumntla-ntshona wengingqi yepaki yesizwe. Eli lilitye elincinci ehlotyeni, kwaye ebusika liba yindawo yemidlalo yasebusika ekumgangatho wehlabathi.
I-Bjorli, le gem yasebusika, yamkela iindwendwe ezivela kulo lonke ilizwe, uya kufumana i-Kristianplass e-Bjorli. Iindwendwe zethu zingakhetha kuluhlu olubanzi lwemisebenzi kwaye zinokuxuba kwaye zitshatise ilungiselelo lazo lobuqu. Uhambo oluya kwiDovrefjell engummelwane lukhetho, umzekelo, ukujonga iinkomo zemusk endle. Kodwa kunye nohambo lokuloba ukuya kwithafa leentaba, okanye ukwenza i-bomfire ukusuka ekuqaleni. Unako kwakhona ukuphumla kwaye ubhiyozele iholide ngendlela yakho.
4.77 · Izimvo eziyi-189
I-Kristianplass sesona siseko sifanelekileyo sohambo olusingqongileyo. I-Dovrefjell emangalisayo kunye ne-Rondane yiyure enye kuphela yokuqhuba kwaye iifjords ezininzi kunye ne-Trollveggen edumileyo kunye ne-Trollstigen e-Åndalsnes zinokwenzeka iihambo zemini. Eyona ndawo iphakamileyo yaseNorway, iJotunheimen, ikufuphi. Ukuhamba ngemizuzu engama-45 ukuya eDombås kukuzisa kwilali encinci yabakhenkethi eneendawo ezininzi.
Ngaphakathi kwekhabhathi unokutyibilika eNordic kwiindlela ozenzele zona, ulandela iinyawo zeempungutye, amaxhama kunye nexhama.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lesja